အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် COVID-19 အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးကို အီးယူ ဆေးဝါးအေဂျင်စီ ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ရှိ ဥရောပကော်မရှင် ရုံးချုပ်ရှေ့တွင် အီးယူအလံလွှင့်ထားသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘရပ်ဆဲလ်၊ အောက်တိုဘာ ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) ၏ ဆေးဝါးများအေဂျင်စီက Pfizer/BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ၏ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအားလုံးအတွက် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်က ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Pfizer/BioNTech ကာကွယ်ဆေးသည် အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၅၅ နှစ်ကြား အသက်အရွယ်များတွင် ဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးနောက် ၆ လခန့်အကြာ၌ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပါက ရောဂါကာကွယ်နိုင်သောပဋိပစ္စည်း (antibody) အဆင့်များ မြင့်တက်လာသည်ကို အချက်အလက်များက ဖော်ပြထားကြောင်း အမ်စတာဒမ်အခြေစိုက် ဥရောပဆေးဝါးအေဂျင်စီ (EMA) က ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများသည် “အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက် အသက်အရွယ်ရှိသူများအတွက် ဒုတိယမြောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အနည်းဆုံး ၆ လအကြာတွင် ထိုးနှံရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ကြောင်း ယင်းအေဂျင်စီက အကြံပြုထားသည်။
ထို့ပြင် ကိုယ်ခံအားစနစ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားနည်းသူများအတွက်လည်း Pfizer/BioNTech နှင့် Moderna ကာကွယ်ဆေးများ အပိုထိုးနှံခြင်းကိုလည်း အကြံပြုထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးများ ထပ်ဆောင်းထိုးနှံခြင်းသည် COVID-19 ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗိုင်းရပ်စ်အား တိုက်ဖျက်သည့် ပဋိပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန် ကိုယ်ခံအားစနစ်များ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အားနည်းသည့် ကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးထားသည့် လူနာများ၏ စွမ်းဆောင်မှု တိုးတက်လာသည်ကို ဖော်ပြထားသော လေ့လာမှုများကိုလည်း ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း EMA က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထပ်ဆောင်းထိုးနှံသောကာကွယ်ဆေးသည် ဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၂၈ ရက်အကြာတွင် ကိုယ်ခံအား ပြင်းပြင်းထန်ထန်လျော့ကျသူများအား ပေးသင့်ကြောင်း EMA က ဆိုသည်။
“ဒီလိုလူနာတွေမှာ COVID-19 ကာကွယ်ထားတဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေ ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုက်ရိုက်သက်သေ အထောက်အထားတွေ မရှိသော်လည်း ထပ်ဆောင်းထိုးနှံတဲ့ ကာကွယ်ဆေးက လူနာအချို့မှာ အနည်းဆုံးတော့ ကာကွယ်နိုင်စွမ်း တိုးတက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုပြီး ဆေးစွမ်းထက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်အသစ် တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ထွက်လာမှုကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက် နှလုံးရောင်ရမ်းတဲ့အခြေအနေတွေ ဒါမှမဟုတ် အလွန်ရှားပါးတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အန္တရာယ်တွေကတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်သွားမှာပါ” ဟု အီးယူအေဂျင်စီက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း EMA အရ သိရသည်။ (Xinhua)
BRUSSELS, Oct.4(Xinhua) — The European Union’s (EU) medicines agency on Monday approved booster doses of the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine for all people aged 18 and over.
It recommended that the booster doses “may be considered at least6months after the second dose for people aged 18 years and older.”
The EU agency also added: “The risk of inflammatory heart conditions or other very rare side effects afterabooster is not known and is being carefully monitored.”
Member states will take decisions related to booster vaccines, according to the EMA. Enditem
Photo : Flags of the EU fly in front of the headquarters of the European Commission in Brussels, Belgium, June 29, 2020. (Xinhua/Zhang Cheng)